iOS 12 ichakubatsira iwe nani kubata nguva yaunoshandisa pamberi pechiso | Ndinobva mac
iOS 12 ichakubatsira iwe nani kubata nguva yaunoshandisa pamberi pekona
Apple inoziva kuti mushandisi anoda kuve ari kutonga pane zvese pane zvavo nhare mbozha. Mumakore achangopfuura, ivo vakashanda nesimba kuti vave nehutongi hwevabereki hwakanga huri kune iro basa. Nekudaro, kwete chete ivo vadiki vanogona kuve nedambudziko rekushandisa yakawanda nguva kupfuura zvavanofanira pamberi pemakomputa, asi hazvimborwadza kuti vanhu vakuru vane zvakare maturusi ekugadzirisa iyi data. Zvisinei, mu iOS 12 kudzora kwevabereki kunenge kuri nani.
Apple inoda kuti vashandisi vayo vawane simba rekuita sarudzo pane izvi nyaya. Y MuIOS 12 mushandisi anozogona kuziva pekutanga-ruoko kuti yavo yekushandisa nhoroondo ndeyei; ndiko kuti, mune maapplication aunowanzo shandisa nguva yakawanda; iwe unogona zvirinani kushandisa yako nguva uye tarisa zvirinani pamabasa akakosha, pamwe nekuve neyako iPhone kana iPad mune nyowani "Usakanganisa" maitiro ayo anozokubatsira iwe kuzorora zvakanyanya kuzorora.
iOS 12 ichasvika inotevera Gunyana kune ese anowirirana iPhone nePad - rangarira izvo iOS 12 ichaenderana nemakomputa akafanana ane iOS 11 yakaiswa-. Zvino, nyaya yekudzora mashandisirwo emidziyo chinhu chinogamuchirwa kupfuura mumwe chete nemaoko maviri.
1 Screen Nguva: kudzora zvatinoita pamberi pechidzitiro
2 Nyowani "Usakanganise" maitiro uye zvirinani manejimendi manejimendi
Screen Nguva: kudzora zvatinoita pamberi pechidzitiro
Pakupera kwaJune, yekutanga yeruzhinji beta yeIOS 12. Mairi, kuwedzera kune kumwe kugadzirisa uye mashandiro, tichava neayo anotakura nemazita: Screen Time. Tine zvikamu zviviri zvakasiyana kune iyi nyowani iOS 12 ficha.
Yekutanga kuburitsa mishumo. Zvinoenderana naApple chairo, neScreen Nguva tichawana zvinotevera: «Screen Screen inogadzira zvakadzama vhiki nevhiki uye zviitiko zvezuva nezuva zviitiko iyo inoratidza iyo yakazara nguva iyo munhu wega wega yakatsaurira kune yega yega app, mashandisirwo ayo maererano nezvikamu zvemaapplication, huwandu hwezaziso dzavanogashira uye kuti kangani vanovhura iyo iPhone kana iPad ».
Saizvozvo, mushandisi anozokwanisawo kumisikidza nguva dzechiitiko uye iyo nguva iyo chishandiso chinobva chadzima wega kusvika zuva rinotevera. Izvi zvichave zvakanaka, kunyanya kune gadza miganho kune kumwe kunyorera —Mitambo, semuenzaniso- uye izvo hazvigone kushandiswa kusvikira zuva rinotevera. Sezvinoonekwa mune zvakaburitswa nekambani, zvese iyo iPad uye iyo iPhone ichapa pachiratidziro inguvai yasara nguva yacho isati yapera.
Aya maficha ane hushamwari hwemwana - chinhu icho chiri inoenderana ne «Mumhuri», nezve avo vakuru vanotanga kucherechedza kutsamira kusingawanzoitika. Nenzira iyi zvichave nyore kuisa miganho pakushandiswa kwemidziyo.
Nyowani "Usakanganise" maitiro uye zvirinani manejimendi manejimendi
Kune rumwe rutivi, Apple inosanganisawo nyowani "Usakanganise" maitiro muIOS 12. Mupfungwa iyi, kana mushandisi akaimisa, chishandiso chinodzikamisa kupenya kwechidzitiro uye vharira zvinouya zviziviso, zvisingavatenderi kuti varatidzwe pane yekukiya skrini. Ndokunge, kubatsira mushandisi kuti awane kurara kwakadzikama uye kwete kumutsa ese maviri kusvika matatu. Kuita kuti basa iri risabatika, mushandisi anogona kugadzirisa poindi iyi zvichienderana nenzvimbo yakatarwa kana nguva yakatarwa, pamwe nekugadzwa pakarenda. Chinhu chinogadzirisa otomatiki kuyerera kwese uye chinoratidza kukosha kweakareruka asi akajeka mabasa.
Zvichakadaro, zviziviso zvakagadziridzwa zvakare muIOS 12. Uye zvinozadzisa kusimbisa kukuru kune chikamu chemushandisi mune zvaanoita. Mune mamwe mazwi, chengetedza zvinokanganisa padiki. Mupfungwa iyi, Apple inobvumidza yakawanda kutonga uye manejimendi avo. Dzinogona dzose dzichiitwa kuti dzibviswe kamwechete uye zvikwangwani zvakaiswa mumapoka zvinosvika. Ndokunge, tichava nazvo Notices kubva kune imwechete app yakakamurwa pamwechete muchimiro chemavara uye kwete senge kusvika zvino izvo zvinowanzo kuratidzwa muNotification Center imwe neimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iOS » iOS 12 ichakubatsira iwe nani kubata nguva yaunoshandisa pamberi pekona
Ini ndakaisa kodhi yacho uye nguva yechiso pane yangu iPhone uye ikozvino handichazvirangarira, chii chandingaite kana kuti ndingaichinja sei?
Chinyorwa chakakosha chaApple chakapfupikiswa mumaminitsi matanhatu